Isticmaalka Sigaarka Iyo Tubaakada
Author Topic: Isticmaalka Sigaarka Iyo Tubaakada (Read 32482 times)
« on: January 12, 2008, 12:31:34 AM »
Sigaarku wuxuu bulshada ku hayaa dhibaato baaxad wayn leh, dhakhtar kasta iyo cilmibaare kasta waxay isku waafaqsan yihiin inuu caafimaadka halis u yahay, laakiin sidaas ay tahayne, isticmaalkiisu maalinba maalinta ka dambaysa wuu sii kordhayaa, waa maandooriye halis ah oo hadduu qofka qabatimo ay adag tahay inuu joojiyo, mar walbana marka ka sii dambaysa, isticmaalkiisu wuu sii kordhiayaa illaa uu noloshaada oo idil la wareego.
Sigaarka uma roono caafimaadka, dhaqaalaha iyo dhaqanka intaba, qeyb kasta oo jirka ka mid ah wuu saameeyaa sida habdhiska neefsiga, habdhiska wadnaha iyo xididada, habdhiska dheefshiidka, habdhiska kilyaha iyo qashin saarka, habdhiska maskaxda iyo dareemaha, habdhiska lafaha iyo murqaha, wuxuu keenaa cudurro kala duwan oo halis ah, waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 50 cudur inuu bini'aadanka u keeno, habdhiska neefsashada kaliya wuxuu ku ridaa 6 cudur.
Waxaan halkaan ku soo koobi doonaa 10-ka cudur ee ugu halista badan ee laga qaado cabista sigaarka:
Kansarka: sanbabada, afka, cunaha, hunguriga, caloosha, xiidmaha, beerka, kaadihaysta, ilmo-galeenka iyo ganaca "pancreas".
Wadne xanuunka, wadne qabadka iyo wadne gariirka.
Burkiitada raagto ee loo yaqaano COPD, waa cudur halis ah oo qofka ku yareeyo oksajiinta, qofka wuxuu ku noolaanayaa nolol silac ah inta uu ka dhimanayo.
Cudurka Faaliga ama Stroke-ga
Macaanka type 2, sigaarka wuxuu baab'iyaa unugyada kotaroola heerka macaanka ee jirkeena.
Neefta iyo ciriiriyowga hawo mareenada sambabaka, khaasatan caruurta waalidiintooda ku ag cabaan sigaarka.
Madhalaysnimo, sigaarka wuxuu baab'iyaa uuna daciifiyaa ugxanta dumarka, hooyada sigaarka cabto ama lagu agcabo waxay halis mar waliaba ugu jirtaa madhalaysnimo, sidoo kale ragga wuxuu u keenaa shahwo iyo xawo yari, waa nooc ka mid ah madhalaysnimada oo dhalinyaro badan lagu arkay..
Dhiciska iyo caruurta oo ku dhalato miisaan hoose, waa dhibaato kale oo hooyooyinka sigaarka cabo xilliga uurka ama lagu cabo ay la kulmaan, badanaa caruurta uurka ku jiro ma bilo dhameystaan.
Indho la'aan, sigaarka wuxuu indhaha saaraa caadka loo yaqaano "Cataract", wuxuu kaloo baabi'yaa unugyada aragga qaabilsan.
Sigaarka wuxuu keenaa in hooyada ay la kulanto waxa loo yaqaano "Ilmo-qoolan" ama "Ectopic Pregnancy" oo ah macnaheeda in uurjiifka uu ku abuurmo meel ka baxsan minka sida tubooyinka iyo meelo kale, tan oo halis wayn ku ah hooyada, maxaayeelay uurjiifka markuu korriimo bilaabo, wuxuu ku dhex dillaacaa hooyada, tan oo ay ku naf wayn karto.
Sigaarka waxaa ka buuxa sun sanbabadaada geleysa marka aad sigaarka dhuuqdo. Sigaar kasta waxaa ku jira 4000 oo kiimko ah iyo 43 waxyaabood oo kansar-ka keena. Nikotiinku waa wax la qabatimo wuxuuna kor u qaadi karaa cadaadiska dhiiggaaga.
Sigaar cabiddu waxay sidoo kale halis u tahay dadka kale. Dadka aan sigaar cabbin ee ku neefsada qiiqa tubkaadu waxay ku jiraan halis la mid ah kuwa sigaar cabba.
Carruurta joogta meesha sigaarka lagu cabbayo waxay badanaa qaadaan hergeb, xiiq, jeermis gala dhegaha ama dhibaatooyinka kale ee neefsashada.
Tubaakada aan qiiqa lahayn sida midda la ruugo waxaa ku jira nikotiin ka badan kan sigaarka. Isticmaalkoodu wuxuu keeni karaa dhibco caddaan ah ama guduudan oo xanuun leh oo afka ku sameysma oo ka dibna noqon kara kansar. Kuwa isticmaala tubaakada aan qiiqa lahayn waxay badanaa qabaan dhibaato ilko sida cirridka oo gadaal u durka iyo ilkaha oo bolola oo suus galo.
Faaiidooyinka Joojinta Isticmaalka Sigaar Cabidda iyo Tubaakada
Halistaada cudurka wadnaha iyo hawl gabidda maskaxdu (faalig) way yaraanayaan.
Heerka neefsashadaada iyo tamartaadu way soo hagaagayaan.
Halista aad kansar ugu jirto way yaraanaysaa.
Haddii aad uur leedahay, waxaad fursad fiican u yeelanaysaa inaad dhasho ilmo caafimaad qaba.
Waxaad hoos u dhigi doontaa halista caafimaadka ee kuwa aan sigaarka cabbin haddii aad joojiso.
Dareenkaaga urinta iyo dhadhamintu way soo hagaagayaan.
Jirkaaga, dharkaaga, baabuurkaaga iyo gurigaagu sidii tubaako uma soo uri doonaan.
Waxaad kaydsan doontaa lacag.
Barashada Sida loo Joojiyo
Dhakhtarkaaga kala hadal joojinta. Kaalmayso qof horay u joojiyay sigaarka kuna guulaystay. Taageero ka hel oo baro sida wax looga qabto welwelka iyo stress-ka.
Takhtarkaaga kala hadal daawooyinka iyo kaalmooyinka kale ee kaa caawinaya joojinta.
Joojinta isticmaalka tubaakadu waxay hagaajin doontaa caafimaadkaaga iyo caafimaadka kuwa hareereysan. Way adag tahay in la joojiyo, laakiin caafimaadkaaga ayaa u qalma inaad joojisa.
KU JOOJI SIGAAR-KA CABISTIISA 10 TILLAABO
Akhriso Halista SHIISHADA oo dhalinyaro badan aaminsan yihiin inay ka halis yar tahay Sigaarka: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=2445.0
رضا ك يا امي
Re: Isticmaalka Sigaarka Iyo Tubaakada
« Reply #1 on: January 12, 2008, 09:12:29 PM »
Thanks SomaliDoc mowduucan. waxana ka codsanlahaay qof waliba in uu dowr ka qaato wacyigalinta sidii sigarka loo joojinlaha gaar ahaan dhalinyarada dhexdooda madama ay yihiin jiilkii intaajka samaynlahaa,lana sameeyo bararujin intii tabartada ah. shicaarna looga dhigo. SIGAARKA JOOJI SI AAD U CAFIMAADO
Education Opens the Doors
Aqoontu Waa Iftiin
« Reply #2 on: January 13, 2008, 07:38:58 PM »
Wacyi galinta waa inaan iska bilawnaa anaga, khaas ahaan dadkeena ku lug leh caafimaadka khaas ahaan dhakhaatiir badan ayaa jira oo balwad leh, (Sigaar, Jaad iyo waxyaabo kale).
Diinteenune waxay qabtaan wax adiga aadan samayneynin dadka ha farin, maxaa yeelay waxaad suureysataa inaad u tagtay dhakhtar ku taqasusay cudurada feeraha, kadibne kugula taliyay inaad joojisid cabitaanka sigaarka, inta uu kaaga sheekeynayay dhibaatooyinka uu leeyahay ayaa waxaa aragtay inuu isagaba sigaar cabo, dhakhtarkaasi warkiisa ma qaadanaysaa??!!
Waa "MAYA", maxaa yeelay haduu leeyahay sigaarka dhibaatooyinka uu dhakhtarkaasi kuu sheegay muxuu isaga u cabayaa?, hadii uu keenayo "KANSAR" iyo cudurada kale ee laguu sheegay, dhakhtarkasi miyuusan caafimaadkiisa ka fakarayn?!
Hadii adan bukaankaaga ka waanin mushkiladan oo aad ka xishooto, inaad bukankaaga u sharaxdo dhibaatooyinka uu leeyahay sigaarka si laguu weydiinin su'aalahaas aan kor ku soo xusay, waa ceeb ka daran tii hore oo sharciga dhakhtarnimada ayaa meel uga dhacday.
Mideeda kale uma baahnid dhakhtar hadaa tahay in laguu sharxo dhibaatooyinka sigaarka caafimaadkaaga u keeni karo!.
Hadii aan su'aal idin waydiiyo akhristayaasha sharafta leh:
Dhakhtarka balwada leh ra'yigee ka heysataa?
Maxaa ka hortagan dhakhaatiirtaas inay joojiyaan balwadaas?
Dhibaatada ay bukaanka u keeni karto balwada dhakhtarkaas?
Your posts reflects your personality, so be Wise and Polite!
« Reply #3 on: January 16, 2008, 09:12:53 PM »
Aniga wax dhib ah uma arko hadii dhakhtarku balwadiisa uu ka qarsanayo bukaanka uusan meesha shaqada ku isticmaalin, haduu awoodi waayo inuu iska gooyo, waxaa daran sida aad sheegtayba in hadalkaaga iyo ficilkaaga is khilaafo taasoo keeni karta in kalsoonida loo hayo dhakhtarkaas ay lunto.
Pharmacist is highly-trained and skilled healthcare professional who perform various roles to ensure optimal health outcomes for his patients.
Ku jooji sigaarka cabitaankiisa 10 tilaabo!
« Reply #4 on: January 19, 2008, 02:55:05 PM »
Walaalkayga dhakhtarka ahow, waxaan kuu soo jeedinayaa sida ugu sahlan oo aad isakaga goyn kartid sigaar cabida adigoo raaca 10-kan tilaabo:
1- Dajiso khuddo aad ku joojisid sigaarka, maalin go'ane xadido si aad u joojisid cabidiisa.
2- Is mashquuli si aad isku hilmaansiisid baahida aad u qabtid sigaarka, iskana fogay baakadaha sigaarka iyo bahalada lagu damiyaba (ashtrays)
3- Biyo badan cab, waxaad agta dhigataa glass casiir (cabitaan qasan) ah, mar walbane kaboo oo ha wada cabin, casiirkane yuusan isku mid noqon (maalin liin, maalin canbo, maalin qare, maalin babaay iwm).
4- Dhaqdhaqaagaaga badi, ha noqon qof jecel raaxada, hadii meesha shaqada ay kuu dhawdahay u lugeey hadii kalane babuurka meel xoogaa fog soo dhigo, jaranjarada isticmaal inta aad fuuli laheed wiishka dabaqa. (jimicsiga wuxuu kugu saacidayaa joojinta sigaarka)
5- Safiican u fakir, hadii aad dareento xaalado ku soo waajahda markii aad sigaarka joojisid, macnaheeda maahan inaad u baahantahay lakain jirka ayaa la barayaa in la'aantiisa uu shaqeeyo (withdrawal symptoms), wax walwal ah yaysan kugu abuurin way baabi' doonaan.
6- Badal socodka noloshaada, ka fogaaw inaad wax ka iibsato dukaankii sigaarka aad ka gadan jirtay, iyo meelaha sigaarka lagu cabo.
7- Wax cudur daar ah ha ka dhigan sigaar cabida, mushkilo hadii ay ku soo waajahdo ama walwal kugu abuurmo sigaarka cudur daar haka dhigan, waxyaabo kale isku mashquuli
8- Ku saacid naftaada joojinta sigaarka, xisaabi lacagaha kaaga bixi jiray sigaarka, iyo waxyaabaha faaidada leh oo aad ku samaysan karto, kuna soo iibso.
9- Cuntada aad cunayso wax ka badal, cuntooyinkaaga fudfudud yaysan ku jirin wax dufan leh, u badnaaw khudaarta iyo frutada (raadso xanjo aanan laheen sokor ama nanac kulul)
10 - Ilaahay talo saaro waydiisane inuu kugu saacido waxaadne ogaataa hal maalin haduu ku soo maro adigoo sigaar cabin in naftaada, qoyskaada iyo bukaankaagaba ay guul u tahay (la sheekeyso dad iska joojiyay sigaarka).
In diagnosis think of the easy first.
Su'aal: Isticmaalka Computerka ama internetka oo qofka balwad u noqda ?
Started by Hassan-DeeqBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 13310 December 10, 2013, 07:14:30 PM
DIGNIIN: JOOJI ISTICMAALKA FASCO CREAM!
Started by Waxbaro!Board Health News and Events
Views: 9079 May 26, 2011, 07:12:02 PM
Su'aal: Isticmaalka kareemKa fisiliinka xiliga galmada?
Started by PrincejeyteBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 6036 April 08, 2017, 05:33:49 PM
Su'aal: Faaiidada ay leedahay isticmaalka barida?
Started by JamaaluddiinBoard Qaybta Wacyi Galinta
Views: 3147 February 14, 2017, 09:55:07 PM
5-ta Qeybood ee Isticmaalka Daroogada
Started by PharmacistBoard Qaybta Wacyi Galinta
Views: 8057 December 22, 2007, 02:59:14 AM